मेरुदण्ड उपचारका क्षेत्रमा आएका नविनतम ज्ञानका लागि सम्मेलनको आयोजना : डा रविन्द्र लाल प्रधान
२०७६ मङ्सिर ७ शनिबार १५:५९:१८ प्रकाशित
राजधानीमा स्पाइन सर्जनहरुको सम्मेलन चलिरहेको छ। २२ र २३ नोभेम्बर गरी २ दिन चल्ने सम्मेलनमा विभिन्न राष्ट्रका स्पाइन सर्जनहरुको सहभागिता रहेको छ। एसोसिएसन अफ स्पाइन सर्जन्स अफ नेपालको आयोजनामा भइरहेको सम्मेलनको सेरोफेरोमा असोसिएसनका अध्यक्ष डा रविन्द्र लाल प्रधानसँग गरिएको छोटो कुराकानीः
यो कतिऔँ सम्मेलन हो? सम्मेलनको उद्धेश्य के हो?
यो हाम्रो ५ औँ सम्मेलन हो। सम्मेलनको उद्धेश्य भनेको विभिन्न फरक विशेषज्ञता हासिल गरेका स्पाइन सर्जनहरुको जमघट गराउनु हो। सम्मेलनमा ५० प्रस्तुतिकरण रहेको छ भने २३ वटा पेपर हरु पनि प्रस्तुत हुनेछन्। हामीले यस वर्षको ‘नारा हेल्दी स्पाइन हेल्दी लाइफ’ भन्ने प्रस्तुत गरेका छौँ। स्पाइनका विभिन्न समस्यामै केन्द्रित रहेर छलफलहरु भइरहेको छ। त्यसका साथै विभिन्न विषयमा प्यानल डिस्कसनहरु हुनेछ। विश्वमा ज्येष्ठ नागरिकहरुको जनसंख्या बढ्छो छ। उहाँहरुमा स्पाइनको समस्या बढी हुन्छ। ह्ड्डी खिइएर जाने,बाँगो भएर जाने, हड्डीको धनत्व कमजोर भएर जाने समस्याहरु देखिएका छन्। यो पनि हाम्रो अध्ययनको विषय रहेको छ। शल्यक्रिया सबै सफल हुँदैनन् जटिलटता पनि आउन सक्छन्। ती जटिलताहरुलाई भविष्यमा कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा पनि हाम्रो छलफल हुनेछ। मेरुदण्डको समस्या र उपचारका क्षेत्रमा आएका नविन उपचारका विषयमा जानकारी दिन सम्मेलनको आयोजना
कति देशका सर्जनहरुको सहभागिता रहेको छ?
सम्मेलनमा ९७ जना सहभागीहरु रहेका छन्। हामीले ९ वटा देशका स्पाइन सर्जनहरुलाई निम्त्याएका छौँ। अमेरिका,जापान,नर्वे, भारत, बंग्लादेश, जापान, अष्ट्रेलिया, साउथ कोरिया आदि देशका सर्जनहरुको उपस्थिति रहेको छ।
नेपालमा स्पाइन सर्जनहरु कति रहेका छन्?
एसोसिएसनमा ४२ जना सर्जनहरु आबद्ध रहेका छन्। समयक्रमसँगै दक्ष स्पाइन सर्जनहरु बढिरहेका छन्। अहिले देशैभर भरतपुर, नेपालगञ्ज, चितवन, भैरहवा पोखरा सबै ठाउँमा यो सेवा राम्रो भइरहेको छ। हामीले बेलबोलाामा वर्कसप पनि गरिरहेका हुन्छौँ।
स्पाइन स्वस्थ्य राख्न के गर्नुपर्छ?
स्पाइन भनेको शरीरको बिचको भागको संरचना हो। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा मेरुदण्ड हो। हामी सिधा मात्र बस्न स्पाइनको आवश्यकता त छ नै हात खुट्टा चलाउन पनि स्पाइनको महत्व छ। स्पाइनको समस्या ३ तरिकाले विभाजन हुन्छ। एउटा जन्मजात हुने, एउटा १० देखि १२ अवस्थासम्म हुने, बुढेस्कालमा हुने समस्याहरु हुन्छ। अलि उमेर पुगेपछि यो समस्या अलि धेरै देखिने हुन्छ। तर अहिले युवाअवस्थामा पनि यस्ता समस्या बढेका पाइन्छन्। त्यसका लागि राम्रो परामर्श, व्यायाम गर्नुपर्छ। हड्डी बलियो बनाउनुपर्छ। राम्रो व्यायाममा ध्यान दिनुपर्छ। आफ्नो पोस्चरमा ध्यान दिने, धेरै निहुरेर काम नगर्ने, गह्रुँगो भारी नउठाउने गर्‍यौँ भने बुढेस्कालमा दुःख पाइँदैन।